December | 2007 | Layma's World
Posted on December 31, 2007 by layma
၂၀၀၇ ပြက္ခဒိန်ကို ငဲ့ကြည့်ခြင်း …
မောင်လေး စာကလေး က လေးမနှင့်တကွ … လေးမထံလာလည်သော မိတ်ဆွေ အပေါင်းကို ဒီလို ရေးခိုင်းထားပါတယ်…။
ကိုရန်အောင် Tag တာကို ကြိုးစားပမ်းစားရေးပြီးသကာလ ဒီနှစ်အတွက် ငါ ဘာမှ ထပ်မရေးတော့ဘူးဆိုပြီး ပျော်ပျော်ကြီး အနားယူနေတဲ့ လေးမ … စာကလေးက ဆီပုံးနဲ့ ကွန့်မန့်မှာ အော်သွားတဲ့ အခါ မျက်လုံးရော …မျက်ဆံရောပြူးသွားရပါတယ်…။
မရေးလို့မဖြစ်ဘူး… အရင်တစ်ခါက ဒေါကီးထားတာ… ဒီတစ်ခါ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေရင် လေးမ ကွန်ပြူတာဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်ရင် ပြင်မပေးဘဲ နေဦးမယ်…။ ရေးပါပြီ စာကလေးရယ်…။
တကယ့်တော့ လူတိုင်းရေးသင့်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ ။ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ရက်စွဲဟောင်းတွေကို ပြန်ငဲ့ ကြည့်ကြရအောင်ပါ…။
လေးမအတွက် အရာရာတိုင်းဟာ ရိုးရှင်း စွာဖြတ်သန်းခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရက်စွဲတွေက ထူးခြားမှုတော့ သိပ်မရှိလှပါဘူး …။
ဇန်န၀ါရီလမှာ လေးမရဲ့ ချစ်လှစွာသော တူလေး မွေးဖွားပြီး လေးမတို့ အိမ်မှာ ၂ ပတ်ခန့်နေခဲ့သောကြောင့် လေးမ … ကလေး အနှီးများ လျှော်ခဲ့ရသည် … ။
ဧပြီလတွင် ခွင့်ရက်ရှည်ရသော်လည်း သင်္ကြန်ပွဲဆိုတာ ဘာမှန်းမသိစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်..။
မေလကုန်တွင် လေးမ ကမ္ဘာ ဟူသော Blog ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး လေးမ၏ အပန်းဖြေမှုပုံစံ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည် ။
ဇွန်လ မှာ …. ချစ်သူငယ်ချင်း မိ လုပ်ခိုင်း သောကြောင့် လုပ်ခဲ့ဖူးသော zorpia account ကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ထာဝရဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး …ဖျက်သိမ်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့Blog တွင် သေခြင်း ဟူသော ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်….။ ထို့နောက် Blog သည်သာ လေးမရဲ့ တစ်ခုတည်းသော နားခိုရာ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည် …။
စက်တင်ဘာလမှာ မိုးရွာနေသည် ဟူသောပို့စ်ဖြင့် Blog ကို ပစ်ထားခဲ့ရပါသည်…။
အောက်တိုဘာလမှာတော့ wordpress.com ကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါသည် …။
နိုဝင်ဘာလမှာ လက်ရှိနေရပ်ကို ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့သောကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့များသော လေးမ ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည် ….။ အလွန်စိတ်မြန်သော… အကျင့်ဆိုးကြောင့် မိတ်ဆွေများ ဟိုလိုက်ရ ဒီလိုက်ရဖြစ်သွားကြပါသည်…။
ဒီဇင်ဘာလတွင်တော့ Online မှ မိတ်ဆွေများကို Online တွင် အလွန်ခင်မင်ပြီး… Tag လျှင် မနေနိုင်သော လေးမသည် လက်ရှိ အချိန်အထိ post ရေးခြင်းဖြင့် နှစ်ဟောင်းကို နှတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားနေပါသည်…။
၂၀၀ရ မှ ၂၀၀၈ သို့
၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ ပြက္ခဒိန်ကြီးရေ
တစ်နေ့တော့ ဆင်းပေးရမှာပါ …
၁၂ လ တည်းပါ …။
တကယ်တော့ ငါ အနားရသွားတာ
မင်း မသိလို့ပါကွာ …။
ဆော့ပင် အ၀ိုင်းကြီးတွေ ရေးခြစ်ခံရတော့မယ်…
အနီရောင်တွေ…အပြာရောင်တွေ … အစိမ်းရောင်တွေနဲ့
မင်းနဲ့ငါ ဘယ်သူပိုများသလဲ နောက်နှစ်ခါ ဒီအချိန်ကျရင်
လေးမဆီလာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို စာကလေးက ရေးပေးစေချင်ပါသတဲ့ရှင်…။
Blog ကို ငဲ့ကြည့်ခြင်း …
blog စလုပ်တုန်းကအမ blog ကိုအရင်ဆုံးလာလည်တဲ့သူ
blog စရေးစဉ်ကတည်းကနေခုထိ ရေးသမျှကို comment အများဆုံး
ရေးတဲ့သူ ၁၀ ယောက်ရယ်ကို သိချင်ပါတယ်..
ပိုစ့် တစ်ပုဒ် အနေနဲ့ရေးပြပါ..
တော်တော် ဦးနှောက်စားစရာပဲ…။ ရက်စက်ပါပေ့ စာကလေးရယ်…။
အဟောင်းတွေ ကမန်းကတမ်းပြန်မွှေရတာဆိုတော့ လွဲချော်မှုများရှိခဲ့ရင် သူငယ်ချင်းတို့ နားလည်ပေးကြပါ …။
လေးမ ဘလော့ဂ်ကို ပထမဆုံး လာလည်တဲ့ ၁၀ ယောက်က…
၁။ ဂျယ်ရီနှင့် ဘော်ဒါများ
မှတ်ချက်။ ။ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိပါ ။
လေးမ ဘလော့ဂ်မှာ comment အများဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူတွေကတော့…. အတိအကျ ပြန်မစစ်နိုင်တော့ဘူး…. ရမ်းအုပ်လိုက်မယ်…။
( ပိုစ့် ၁၃၆ ပုဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ ကွန့်မန့်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ကို ပြန်မွှေရတာ မူးလို့ )
၁၀။ မိုးချစ်သူ လို့ထင်ပါတယ်ရှင်…။
မှတ်ချက် ။ ။ လက်ဆောင်ပေးရန် စိတ်ကူး လုံးဝ..လုံးဝ မရှိပါ…။ ( တိတ်တိတ်လေး မုန့်ကျွေးမယ်နော်… ဘယ်သူ့မှ ပြောနဲ့နော် ) :P
အားလုံးပဲ … စလိုက်ကြစို့ …
Filed under: Seasonal Post, Tag |	16 Comments »
Posted on December 28, 2007 by layma
Posted on December 26, 2007 by layma
ဒီလိုပြောလို့ ကောင်လေးကို လွမ်းနေတာ … တမ်းတနေတာလို့တော့ မထင်နဲ့နော်…။ ကောင်လေးနဲ့ ခင်နှင်းဆီရဲ့ အတိတ်ရက်စွဲလေးတွေကို မေ့မရနိုင်သေးတာပါ … ။
“ခင်နှင်းဆီကို ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျာ” ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းသက်သေ … လူသက်သေ ဘာဆိုဘာမှ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ခင်နှင်းဆီ … မိဘစီမံရာနာခံခဲ့တဲ့အခါ တစ်ကျောင်းလုံးက မေးငေါ့ကြတယ် …။ ကြိတ်ဆွေးနေတဲ့ ကောင်လေးကို အသနားပိုကြတယ်…။
Filed under:2in 1 style, Heart touching songs |	10 Comments »
Online ပေါ်က ညီမလေး…
Posted on December 25, 2007 by layma
Filed under: Pieces, That's what I wanna say |	17 Comments »
Posted on December 21, 2007 by layma
Filed under: Flower, Poem |	11 Comments »